Fananganana tanàna vaovao Azo atao tsara any amin’ny RN1
Raha tsy maintsy hanao tanàna vaovao ihany, andao apetraka ny fotodrafitrasa mifanandrify amin` izany.
Tetikasa Tanà-masoandro Manomboka milavo lefona Rajoelina…
Napetraka omaly ny vatofototry Akademiam-pirenena ho an’ny Kolontsaina sy ny zava-kanto Malagasy na ny ANAC (Academie Nationale des Arts et de la Culture)
Delegasionina hiady ny “Iles Eparses” “Olona mahavita no ilaina hiady hevitra”
Ny lapan`Andafiavaratra no handray ny fifampidinihana ho amin`ny alatsianiny 18 novambra izao miaraka amin’ny solontenan’ny fitondrana frantsay ny mikasika ireo Nosy Malagasy (Iles éparses) aty
Maka Alphonse - filohan’ny CFM “Aoka ny fitsarana tsy hatao fitaovana politika”
Sesilany tato ho ato ny tompon’andraiki-panjakana voarohirohy amina fanodinkodinana volam-bahoaka. Hentitra i Maka Alphonse,
Vovonana AVM 21 « Mila tanora mavitrika i Antananarivo »
Nanao fanambarana miaraka tetsy amin’ny Hotely Manga etsy 67ha omaly ny solontenana fikambanana maro mivondrona ao anatin’ny vovonana antsoina hoe AVM 21
Kandida ben'ny tanàna ao Brickaville Efa foana ny fanamelohana ahy, hoy i José Clément Randrianasolo
Tsy marina ny filazana fa meloka ny tenako satria efa foana tsy manan-kery intsony ny didy N° CATO -165-CO/18 ny 07 martsa 2018 satria efa misy didim-pitsarana manafoana azy io dia ny laharana faha CATO-835-CO/18, nivoaka tamin’ny 18 jolay 2018,
Firaisamonim-pirenena “Tsy manisy lanja ny fifidianana mpanolotsaina”, hoy ny KMF-Cnoe
Mbola vitsy amin`ireo olom-pirenena Malagasy no mahafantatra fa hisy fifidianana amin`ny 27 novambra izao.
Faly tokoa aho miaraka aminareo rehetra eto mifandinika izay mahasoa ny firenena izay hiombonantsika rehetra tonga eto, hoy i Marc Ravalomanana. Zava-dehibe ny fametrahana ny atao hoe antoko mpanohitra mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka izany. Hatramin’izay mantsy rehefa miresaka fanoherana izany teto Madagasikara dia heverin’ny rehetra fa olona hanongam-panjakana foana. Tsy tokony hitranga eto Madagasikara intsony ny fanonganam-panjakana, hoy izy. Fomba fiasa sy fomba fijery vaovao amin’ny fanoherana ara-politika eto Madagasikara ho arofanina ho an’ny mpitondra amin’izay fanapahan-kevitra raisiny ka mety tsy mahasoa ny firenena sy ny vahoaka Malagasy no hatao. Tsy hangina isika fa ho sahy hiteny ny tsy fanarahan-dalàna mety hitranga na tetikasa tsy mitondra soa ho an’ny vahoaka Malagasy. Amin’izao fivoaran’ny teknolojia vaovao izao dia efa lany andro ny fanapenam-bava ny antoko mpanohitra mety ataon’ny mpitondra. Ny fampivondronana ny feontsika rehetra ho iray dia efa marika sahady fa miditra amin’ny vanim-potoana vaovao ny fanoherana ataon’ny antoko mpanohitra eto Madagasikara, hoy izy. Mikasika ilay lalàna 2011-013, dia ampiharo aloha ny lalàna fa rehefa mahita ny rehetra fa misy tsy mety any aoriana any dia miaraka mifampidinika fa tsy ianareo irery no hanao izay mety aminareo, hoy i Marc Ravalomanana. Nambarany fa tsy hisy fanoherana, raha tsy ampian’ireo firenena mpiara-dia amintsika, ny firenena mikambana,… ary aza mieritreritra hoe hanao antoko mpanohitra eto isika, raha tsy tohanan’ireo, hoy izy. Tsy hisy mihitsy fitondrana tena mandeha amin’ny fampandrosoana sy mijery ny fiainam-bahoaka raha tsy misy ny mpanohitra fa manao izay danin’ny kibony fotsiny. Ny fananana mpanohitra matanjaka no tena mahatonga ny fitoniana amina firenena iray, toy ny any Etazonia, izay ny Demokraty no mpanohitra amin’izao.
Tsy tena mitombina tsara ilay zavatra atao, fa ohatra ny entim-po fotsiny. Lehibe loatra ilay hambom-po hoe hanangana izao sy izao, toy ny resaka Tanamasoandro, hoy i Marc Ravalomanana. Mila atao ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-piarahamonina hoe sao dia tanimbarin’olona io, sao dia hiteraka tondra-drano io,… Laharam-pahamehana ny resaka fanjarian-tsakafo satria raha ny fihaonany tamin’ny UNICEF, dia tena nilaza ireo fa tena tsy misy hohanina ny olona ka izay no mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Tany amin’ny Vondrona Eoropeanina, nilaza izy ireo fa tao anatin’ny herintaona dia tena lasa nitotongana ny Malagasy. Tsy mifantoka amin’ny tena fampandrosoana fa ampifaliana amin’ny zavatra tsy dia tokony handaniana vola, ka izany dia zavatra iray ampianarina ny Malagasy hitandrina fa mandalo fotsiny ny fampifaliana fa ny fahoriana hiverina indray.